Malaysia: Najib Razak oo diiday inuu iscasilo - BBC Somali
Malaysia: Najib Razak oo diiday inuu iscasilo
Image caption Dad ku mudaaharaadaya Malaysia.
Raiisal wasaare Najib ayaa gaashaanka ku dhuftay banaabaxayada laga soo horjeedo, isaga oo sheegay in dibadbaxyadu aanay ahayn dariiq saxda ah ee cabashooyinka lagu muujiyo.
Waxaanu sheegay inay khalkhal ku ridi karaan aminiga. Isaga oo khudbad ka jeediyey maalinta qaranimada ee Malaysia, ayaa ra'iisal wasaraahu ku tilmaamay dibbadbaxayada isaga lagaga soo horjeedo qaar aan qiimo ku fadhiyin, isla markaana aan ka tarjumeeyn danta dalka.
Dad badan ayaa dhigay banaabaxyo ay kaga soo horjeedaan raiisal wasaraha, kadib markii la ogaaday inay ay xisaabta bangiigiisa ay ku jirto toddobo boqol oo milyan oo doolar.
Hay'ada hantidhawrka ee Malaysia ayaa sheegtay in lacagtani ay ahayd deeq ka timid bariga dhexe.
Balse, intaan hantidhawrku warbixintan soo saarin ayaa raiisal wasaarahu waxaa uu xilka ka qaaday ku xigeenkiisa oo su'aal ka keenay halakay lacagatani ka timid isagoo xeer ilaaliyahii guudna badalay.
Ninkii isaga siyaasada macalinka ugu ahaa ra'iisal wasarahii hore Mahatir Maxamed, ayaa sheegay inaan Malaysia sharci ka shaqayn hada. Isagoo ka hadalaya meel ay isagu soo baxeen dibadbaxayaashu ayaa waxa uu ku baaqay in xilka laga qaado raiisal wasaraha.
Inkastoo Mr Mahatir laftiisa lagu eedeyey inuu isagu aabe u ahaa nidaam suurto galinaya musuqmaasuq.